Ajaanibtii la soo furtey oo Garowe tagay
25 Dec 25, 2012 - 9:34:42 AM
Waxaa maanta 25 December,2
012 galinkii danbe magalada Garowe xarunta Dowlada Puntland la soo gaarsiiyay 22-kii ajaanibta ahaa oo laga soo bad baadiyay gacanta burcad badeedka,waxana hogaaminayay Taliyaha ciidanka bada Puntland,taliye ku xigeenka ciidanka biliiska Puntland,La-taliyaha madaxwaynaha dhanka saxaafada iyo saraakiil kale.
Saxaafada ayaa loo soo bandhigay dadkaani ajaanibta ah oo u kala dhashay wadamo dhowr ah,waxaana wajiyadooda iyo guud ahaan jirkooda ka muuqday qaarkood dhaawacyo ay u gaysteen burcadii gacanta ku haysay.
Munaasibad ay xukumada Puntland ku soo bandhigaysay Ajaanibta lasoo bad baadiyay ,ayaa lagu qabtay hotalka Rugsan,waxaana kasoo qayb galay wasiirka maaliyada,ku xigeenkiisa,duqa degmada Garoowa,Ururka haweenka Nugaal iyo masuuliyiin kale.
Bilowga Kulanka waxaa ka hadlay Taliyaha ciidanka bada Puntland Admiraan-Cabdirisaaq Diiriye Faarax,wuxuna sheegay inay farxad wayn u tahay dowlada iyo shacabka Puntland soo furashada lahaystayaashii ay mudo 3-sano ku dhow ay haysteen burcad badedka.
Taliye Cabdirisaaq waxa uu sheegay xukumada Puntland inay ka Go'an tahay sidii loosoo afjari lahaa kooxaha argagaxisda oo ay kow iyo labo ka yihiin burcad badeedka iyo shabab.
Gen-Muxyadiin Axmad Muuse ayaa sheegay howlgalka ay ciidanka dowlada Puntland oo isku dhafani kula dagaalamayeen burcad badeedka inuu uga dhintay hal Askari oo la yiraahdo Cabdirisaaq Cawil Guray afarkale ay ku dhaawacmeen.
Wuxuna sheegay lahaystayaashaani 3-sano ku dhawaad inay ku jireen gacanta burcad badeedka ,hadana ay nabad qabaan xaaladooda caafimaadka uu yahay mid taab ah.
Agaasimaha La-dagalanka burcad badeedka Puntland Cabdirisaaq Maxamad Axmad (Ducaysane) ayaa goobta ka sheegay inay tahay guul lama ilaawaan ah soo furashada dadkaani wajiyadoodu ay ka muuqato dhibaatooyin sanado ah,wuxuna sheegay inay awal ahaayeen 24-qof balse labo ka mid ai ay ku dhinteen markabka dushiisa.
Mr.Ducaysane ayaa sheegay labo markab oo kaliya in lagu haysto xeebaha Puntland,taasna ay cadayn u tahay dadaal dheer oo ay shacabka iyo dowladooda oo isku duubani u galeen la -dagalanka burcad badeedka.
Kabtanka Marakabka ay burcad badeedku afduubteen oo la yiraahdo Cali Saalax dhalasho ahaana kasoo jeeda Dalka aanu dariska nahay ee Yemen,ayaa goobta kasoo jeediyay khudbad naxdin xanbaarsan oo ka sheekaynaysa nolashada ay ku sugnaaneeyn mudadii ay gacanta burcad badeedku ku jireen.
Dhinaca kale mid ka mid ah lahaystayaashii bad baadada helay,ayaa tilmaamay Dowlada Puntland inay u hurtay dhiigaado iyo maalkooda ayna mar kasta maskaxda ku hayn doonan soo bad baadinta iyo soo dhawayntii ay Garowe kala kulmaan.
Waa howl galkii ugu horeeyay oo noociisa ah lagu soo bad baadiyo 22-ajaanib ah kuna jiray mudo sadex sano gacanta burcad badeedka,waxana maalmahaan soo socda dadkaani loo galbin doonaa dalalkii ay kasoo kala jeedeen.
Halkan ka dhageyso Dhamaan Codadkii laga jeediyey madasha Galabta